विदेशी सडकमा नेपाली भोकै सुत्ने दिन आउँदैन : डा. बद्री केसी, एनआरएनए उपाध्यक्ष – News Portal of Global Nepali
विदेशी सडकमा नेपाली भोकै सुत्ने दिन आउँदैन : डा. बद्री केसी, एनआरएनए उपाध्यक्ष
21/11/2021 मा प्रकाशित
शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले कोभिड महामारीका कारण विदेशमा धेरै नेपाली समस्यामा परेको स्मरण गरे। र, उनले यसबाट पाढ सिक्दै आफूहरूले आगामी दिन कुनै पनि नेपालीले भोकै विदेशी सडकमा भौतारिने दिनको अन्त्य गर्ने वाचा गरे। उनले महामारीमा हजारौं पीडितलाई संघले राहत तथा उद्धार गरेको स्मरण गराए।